Indlu entle yasefama ngasechibini
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguHilda
Yonwabela indawo yokwenyani yefama yaseSweden yokuhlala, ebekwe ngasese kwifama yosapho lwethu neegusha, amahashe, inkukhu kunye nezinja. Ukufikelela kwindawo yokuqubha kunye nechibi lokuloba, i-sauna, isikhephe kunye nezilwanyana ukuba zibambene. Indlu ilele e-Älmtamåla, ilali entle yasemaphandleni enetrafikhi encinci kunye neendawo ezingqongileyo ezimangalisayo kubo bonke abathandi bendalo.
Intle, indlu yasehlotyeni esandula ukulungiswa kwifama yethu, ilele phakathi kwamachibi amabini kwaye ijikelezwe yindalo emangalisayo yaseSweden!
I-Älmtamåla yiLali entle enabantu abamalunga nama-50, uninzi lwabo bahlala ngokusisigxina kule ndawo. Kukho iifama ezininzi ezinezilwanyana, kunye namachibi okuloba iintlanzi, iindlela ezingenasiphelo ezintle zehlathi kwindawo kwaye kude neendlela ezinkulu. Yiparadesi ezolileyo kumaphandle aseSweden kwaye unakho ukubona kunye namava obomi bokwenyani basefama yaseSweden.
Umbuki zindwendwe ngu- Hilda
Indlu yethu ilele kumgama oziimitha ezili-100, kunye ne-driveway eyahlukileyo. Ngalo lonke ixesha fikelela kwifowuni ekwaziyo, kungenjalo indawo yabucala enegadi yayo